Apple yeKisimusi Chiziviso, Macbook Pro Nyaya, Kupera kweApple's AirPort Gear, uye Zvimwe Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
Apple's Christmas chiziviso, Macbook Pro nyaya, kupera kweApple's AirPort giya, nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Peter Rhodes | | apuro, Apple Music, Apple Store, MacBook Pro
Imwezve Svondo tinodzoka kuzokuperekedza neyekuunganidzwa kwetsika uko kwatino simbisa zvinyorwa zvakawonekwa zvakanyanya kana zvakanyanya kutaurwa nezvazvo mubhurogi redu uye munharaunda yakatenderedza kambani yeapuro yakarumwa.
Nhasi tinoburitsa chinyorwa chekupedzisira chaMbudzi uye ndechekuti mumazuva mashoma tinopinda mwaka wekupedzisira uyo watisingazive kana pakupedzisira uchizotiunzira mukana wekutora maAirPod matsva ekambani kuti, sezvamunoziva, kutengeswa kwayo yakanonoka kuendesa chigadzirwa chakapedzwa mushandisi.
Isu tinotanga kuunganidzwa kwanhasi nechinyorwa chichava chinonakidza kune vashandisi vari kugamuchira yavo nyowani MacBook Pro uye kune mishumo yekuti iyo chiratidzo cheminwe mitatu pane iwo matsva eTrapppads iwe uri kunetseka. Sezviri pachena iyi trackpad nyowani, yakakura kwazvo kupfuura mamodheru eMacBook Pro, haishande nguva dzese, asi inodaro zvisingaite, chinetso chakanyatso zadza Apple mapikicha ekutsigira nevamwe vazhinji nezvichemo. kuyedza kutsvaga mhinduro kuchinetso, mhinduro ingangouya nenzira yeiyo macOS yekuvandudza.
Vhiki rino rakasarudzwawo neavo kubva kuCupertino kuisa mumashambadziro maviri matsva matsva, chimwe chazvo chakanangwa kurudzira Apple Music yatiri mairi sevanopikisa Taylor Swift naDrake uye imwe yatakange takamirira sechirevo cheLotto kuSpain, kushambadzira kweKisimusi kwaApple uko kunoratidzwa Frankenstein rarama Kisimusi neApple zvigadzirwa.
Dare rekuvandudza re Apple AirPort inonyungudika kuisa pfungwa pane mamwe madhiragi eiyo firm, mune iyi imwe yacho vamwe vakatarisa kuvandudzwa kweApple TV. Apple yanga ichiisa izvi AirPorts parutivi kwenguva refu uye kwete nguva refu yadarika takaona sei AirPort Extreme neTime Capsule zvakanyangarika muzvitoro zvavo muUnited States.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi vashoma vanotova neMacBook Pro nyowani neTouch Bar mune yavo, tinokukurudzira kuti usaise Windows pairi uchishandisa iyo Apple BootCamp chishandiso pachayo, uye vashandisi vanomhan'ara vari kutanga kuoneka kuti makomputa ako masipika akakuvadzwa neWindows 'kuvashandisa pasi peBootCamp.
Zviripachena mutyairi anoshandiswa neBootCamp kugadzira maspika epaLaptop kuti ashande muWindows haasati asvika parizvino uye ari kuita kuti vateteme zvakanyanya kupfuura zvavanogona mukuita kwese. izvo zviri kukonzera iyo kubvaruka kwemuviri wavo.
Mazuva mashoma apfuura, mubvunzurudzo yaakapa, Ken Segall, aimbova director weApple, akataura mubvunzurudzo pfungwa yekuti Elon musk, iyezvino CEO we Tesla Motors, pakati pevamwe.
Muchokwadi, yakaratidza fungidziro mukana wekubatana pakati pemarudzi maviri emarudzi. Iyi pfungwa yaizonyatsofarira kufambira mberi kwakaitwa muApple Car, kubvira bhizinesi Tesla kunoenderana nekutengeswa kwemotokari dzemagetsi dzemagetsi. Uye haisi nguva yekutanga kuti pfungwa iyi ifungidzirwe.
Chitoro chitsva cheApple chingave chatove yakagadzirirwa vhura magonhi ayo mangwana acho 3 Zvita muguta reParis. Muvhiki rino rakafanana runyerekupe rwakatangwa pamambure umo maive nekutaura nezve mukana wekuti Apple yakanga yaronga kuvhura chitoro kuSpain, kunyanya muguta reGranada, asi zvese izvi zvinoita kunge zvinokanganisa uye hapana chakajeka kuti Apple Store ichavhura munzvimbo nyowani yekutenga yeNevada.
MuUnited States, zvinoita sekunge vazhinji ndevagari vasina kutora kukunda zvakanyanya, pamwe nekushamisika, kwaDonald Trump uye zuva nezuva vari kuratidza vachisimbisa kuti havadi iye semutungamiri, sekunge kuburikidza nemhando iyi kuratidzira ivo vanogona kuchinja izvo ruzhinji rwevagari venyika vakasarudza. Panguva yesarudzo, Trump akaita nhamba huru yezvipikiso zvine nharo, anovimbisa kuti, sekuona kwedu mumavhiki ekutanga esarudzo yake, Zvinotaridza kuti vakawira panzeve, chimwe chinhu chisingadiwe nevavhoti vavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Apple's Christmas chiziviso, Macbook Pro nyaya, kupera kweApple's AirPort giya, nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
VLC ichakubvumidza iwe kutamba mavhidhiyo mazana matatu nemakumi matatu nekutenda, unogona ikozvino kurodha beta
Nyora bhuku redhijitari nemaapplication eMac